ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း သတင်း - ပူတင်၏ဆောင်းပါးသည် Yakutia ၌မီးလောင်ပြီး Cannes ရှိငါတို့၏ “ အယ်ဒီတာရုံး သတင်းများ” ကိုကြေးနန်းပုံစံဖြင့်နေ့စဉ်တင်ပါ၊ https://t.me/redakciya_channel Subscribe! *** ယခုအပတ်တွင် CEC သည်မဲရုံများ၌ကင်မရာများကိုပိတ်လိုက်သည်၊ Proekt သတင်းစာကမလိုလားအပ်သောကြေငြာခြင်းခံရပြီးမော်စကို၌ QR ကုဒ်များကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး Yekaterinburg တွင်အာဏာပိုင်များကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ “ ထုတ်ဝေမှုအသစ်တွင်အရာအားလုံးသည်အစီအရင်ခံချက်၊ အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည်။ သတင်း " အကြောင်းအရာ - 0:00 အားလုံးဘဲမင်္ဂလာပါ။ 0:17 သန်းမရှိဘဲပျော်ရွှင်မှု 1:43 Putin နှင့်ရုရှားနှင့်ယူကရိန်းတို့၏သမိုင်းကြောင်း 5:37 Lukashenka ထပ်ရောက်လာတယ် 7:03 ခရီးသွားအပိုဆုများ (ကြော်ငြာခြင်း) 7:58 ဟစ်တလာနှင့်အတူစာအုပ်များနှင့်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ၉:၄၅ Junk "Draft" ၁၀:၄၈ လန်ဒန်စာရင်းပိတ်လိုက်သည် ၁၃:၁၅ Cossacks များသည်ရုရှားအစောင့်သို့သွားကြသည် ၁၄:၂၆ ရှုထောင့်သည်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ ၁၅:၃၄ ရုရှားနိုင်ငံတွင်တောမီးများ ၁၇:၅၈ Cannes ရှိ Petrovs နှင့်မဆုတ်မနစ်သောလက်သီးများ 20:01 covid ဘာဖြစ်နေတာလဲ 23:04 Peter Mamonov သေဆုံးခဲ့သည် ၂၄း၁၅ တွင် Ekb ရှိ Tsar ၏ဘာသာရေးစီတန်းလှည့်လည်ပွဲ 25:41 အာကာသထဲရှိ Branson (နီးပါး) ၂၇း၅၇ တွင် Penza ရှိနက္ခတ်တာရာကိုဖြိုဖျက်ခဲ့သည် ၂၉:၁၂ သံတမန်သည်မြှားကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့သည် ရောင်းကုန် "ထုတ်ဝေမှု": https://mamcupy.com/catalog/redaktsiya/ Aleksey ရှိ T-shirt: https: //kkaravaev.com/product-categor ... *** "အယ်ဒီတာ့အာဘော်" ကိုပံ့ပိုးကူညီသူဖြစ်လာသည်။ https: //www.youtube.com/channel/UC1eF ... ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုကွန်ယက်များသို့စာရင်းပေးသွင်းပါ။ ကြေးနန်းရုပ်သံလိုင်း "တည်းဖြတ်မှုများ" https://t.me/redakciya_channel Alexey ရဲ့ Instagram ကို https://www.instagram.com/pivo_varov Alexey ၏ TikTok နှင့် "အယ်ဒီတာ့အာဘော်": https://vm.tiktok.com/ZSgd7NJp/ VK ရှိအယ်ဒီတာ့အာဘော်ရုံး https://vk.com/redakciya_pivovarova တုန်ခါမှုရှိချန်နယ် "တည်းဖြတ်မှုများ" https://vb.me/redakcia_yt Alexey ရဲ့တွစ်တာ https://twitter.com/pivo_varov Facebook အယ်ဒီတာရုံး https://www.facebook.com/pivovarov.red အတန်းဖော်များ https://ok.ru/redakciya ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ် "Zen" ၌ https://zen.yandex.ru/redakciya ပူးပေါင်းခြင်းနှင့်စိတ်ကူးများ info@redakciya.com ကြော်ငြာအတွက် newsroom@blogo-sphere.com #စာရင်းကိုင် #ဘီယာသမားများ #သတင်း
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း သတင်း - ပူတင်၏ဆောင်းပါးသည် Yakutia ၌မီးလောင်ပြီး Cannes ရှိငါတို့၏ “ အယ်ဒီတာရုံး သတင်းများ” ကိုကြေးနန်းပုံစံဖြင့်နေ့စဉ်တင်ပါ၊ https://t.me/redakciya_channel Subscribe! *** ယခုအပတ်တွင် CEC သည်မဲရုံများ၌ကင်မရာများကိုပိတ်လိုက်သည်၊ Proekt သတင်းစာကမလိုလားအပ်သောကြေငြာခြင်းခံရပြီးမော်စကို၌ QR ကုဒ်များကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး Yekaterinburg တွင်အာဏာပိုင်များကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ “ ထုတ်ဝေမှုအသစ်တွင်အရာအားလုံးသည်အစီအရင်ခံချက်၊ အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည်။ သတင်း " အကြောင်းအရာ - 0:00 အားလုံးဘဲမင်္ဂလာပါ။ 0:17 သန်းမရှိဘဲပျော်ရွှင်မှု 1:43 Putin နှင့်ရုရှားနှင့်ယူကရိန်းတို့၏သမိုင်းကြောင်း 5:37 Lukashenka ထပ်ရောက်လာတယ် 7:03 ခရီးသွားအပိုဆုများ (ကြော်ငြာခြင်း) 7:58 ဟစ်တလာနှင့်အတူစာအုပ်များနှင့်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ၉:၄၅ Junk "Draft" ၁၀:၄၈ လန်ဒန်စာရင်းပိတ်လိုက်သည် ၁၃:၁၅ Cossacks များသည်ရုရှားအစောင့်သို့သွားကြသည် ၁၄:၂၆ ရှုထောင့်သည်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ ၁၅:၃၄ ရုရှားနိုင်ငံတွင်တောမီးများ ၁၇:၅၈ Cannes ရှိ Petrovs နှင့်မဆုတ်မနစ်သောလက်သီးများ 20:01 covid ဘာဖြစ်နေတာလဲ 23:04 Peter Mamonov သေဆုံးခဲ့သည် ၂၄း၁၅ တွင် Ekb ရှိ Tsar ၏ဘာသာရေးစီတန်းလှည့်လည်ပွဲ 25:41 အာကာသထဲရှိ Branson (နီးပါး) ၂၇း၅၇ တွင် Penza ရှိနက္ခတ်တာရာကိုဖြိုဖျက်ခဲ့သည် ၂၉:၁၂ သံတမန်သည်မြှားကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့သည် ရောင်းကုန် "ထုတ်ဝေမှု": https://mamcupy.com/catalog/redaktsiya/ Aleksey ရှိ T-shirt: https: //kkaravaev.com/product-categor ... *** "အယ်ဒီတာ့အာဘော်" ကိုပံ့ပိုးကူညီသူဖြစ်လာသည်။ https: //www.youtube.com/channel/UC1eF ... ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုကွန်ယက်များသို့စာရင်းပေးသွင်းပါ။ ကြေးနန်းရုပ်သံလိုင်း "တည်းဖြတ်မှုများ" https://t.me/redakciya_channel Alexey ရဲ့ Instagram ကို https://www.instagram.com/pivo_varov Alexey ၏ TikTok နှင့် "အယ်ဒီတာ့အာဘော်": https://vm.tiktok.com/ZSgd7NJp/ VK ရှိအယ်ဒီတာ့အာဘော်ရုံး https://vk.com/redakciya_pivovarova တုန်ခါမှုရှိချန်နယ် "တည်းဖြတ်မှုများ" https://vb.me/redakcia_yt Alexey ရဲ့တွစ်တာ https://twitter.com/pivo_varov Facebook အယ်ဒီတာရုံး https://www.facebook.com/pivovarov.red အတန်းဖော်များ https://ok.ru/redakciya ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ် "Zen" ၌ https://zen.yandex.ru/redakciya ပူးပေါင်းခြင်းနှင့်စိတ်ကူးများ [email protected] ကြော်ငြာအတွက် [email protected] #စာရင်းကိုင် #ဘီယာသမားများ #သတင်း
Футболка на Алексее: https://kkaravaev.com/product-categor...